Shiinaha Custom bac soosaarayaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsadaada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Bacda bisadda
1. Ayaa u baahan bac bisad:
(1) Waxaan u maleynayaa qof kasta oo bisad yar leh inuu u baahan yahay mid! Kuwani waa kuwa sida ugu faa'iidada badan u xambaarsan eeyaha, Kahor inta aanan ogayn inay jiraan wax noocaas ah, waxaan isticmaalay boorsada weyn, ma aqaano sida saxda ah ee loo qaado Labaduba waxay dareemeen inay aad u dhibsan yihiin.Waxaan u maleynayaa inay jiraan laba nooc oo ey leh oo ka faa'iideysan doona inta ugu badan bisadda: dadka reer magaalka ah, dadka firfircoon iyo dadka aan socon karin muddo dheer.
(2) Haddii aad ku nooshahay magaalo sideyda oo kale aadna firfircoon tahay, markaa waxaad jeclaan laheyd inaad qaadatid boorsada bisada Hadda, si fudud ayaan baaskiil ula raaci karaa eeygaaga, u gey dukaanka raashinka (wuxuu ka cabanayaa walaac kala go 'ah , sidaa darteed ma haysto dooq aan ka aheyn inuu isaga ka tago dukaanka) ama inuu raaco gaadiid dadweyne.Marka aan xitaa u kaxeeyo maqaaxiisa si uu ugu dhadhamiyo khamriga.Waxaan galiyay kursiga keydka hoostiisa mana jirto cid xitaa dareentay. , waxaan ku qaadnay safar doon ah. Faa'iidada weyn ee ugu weyn ayaa ah inuu jecel yahay culeysyada ama xamuulka. Waa curler, sidaa darteed wuxuu jecel yahay inuu hoos u dhaco oo uu ku seexdo Meelo adag. Aad buu u fiican yahay.
(3) Waxaan u maleynayaa in boorsooyinka bisaduhu ay si gaar ah ugu habboon yihiin dadka reer magaalka ah ee leh kittens. Gaar ahaan haddii aad isticmaasho gaadiidka dadweynaha wax badan ama aad raacdo baaskiil, waa inaad soo qaadataa boorso. Waxaan arkaa xalkan wax badan maxaa yeelay uma baahnid gaari aad yeelato eey. Boorsada eyga ayaa kaliya kaa dhigi doonta mid aad u dabacsan. sidoo kale waa Ey aan socon karin waqti dheer.
(4) Sidee kooxda labaad u lahaan jireen bisado aan socon karin waqti dheer.Haddii aad jeceshahay socodka, laakiin boorsada bisadu kuuma socon karto adiga maalinta oo dhan, side boorsada bisadu waa xalka ugu fiican. bisadaha iyo hal bisad ayaa u baahan jimicsi ka badan kan kale, tani sidoo kale waa xal fiican.
J: Waxaan kuugu soo jawaabi doonnaa 4 saacadood gudahood ka dib marka aan helno iimaylka lagaa doonayo.
(4) Haddii aad u baahato oraah, fadlan la soco habka xigashada, kaas oo noo suurta gelin kara inaan si fiican kuugu soo bandhigno.
Calaamadaha kulul: Bacda bisadaha, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka